ဟမ်မူရာဘီ၏ကျင့်ထုံးနှင့်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးအကြားတူညီမှု - Afrikhepri Fondation
တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 1, 2021
Lhe Code of Hammurabi သည်ရှေးအကျဆုံးရေးသားထားသောဥပဒေများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဗာဗုလုန်ဘုရင်ဟာမူရာဘီ၏အစပြုမှုဖြင့်ယေရှုခရစ်မတိုင်မီ ၁၇၃၀ ခန့်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Code of Hammurabi သည် ၂.၂၅ မီတာအမြင့်ရှိပြီးအချင်း ၁.၉ မီတာ၊ မက်စတိုတေးမီးယား၏နေနတ်ဘုရားရှေ့မှောက်၌ရပ်နေသောဟမ္မူရာဘီကိုကိုယ်စားပြုသောပန်းပုရုပ်တုကြီးတစ်ခုမှလှူသည်။ အောက်တွင်, Akkadian ကျူနီဖောင်းအက္ခရာများ, ပြုစုတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များအစုပါဝင်သောရှည်လျားသောစာသား, ရေးထိုး။ မက်စတိုတိုတေးနီးယားတော်ဝင်ရေးထိုးထားသည့်သမိုင်းဝင်အစဉ်အလာတွင်ဘုရင်ဟမ္မူရာဘီ၏လုပ်ရပ်များ၊ သူ၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးများနှင့်သူ၏တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များအားဤစတေးလ်တွင်ထွင်းထုထားသည့်နိဒါန်းနှင့်စတင်သည်။ « အားကြီးသောသူသည်အားနည်းသောသူကိုမညှဉ်းဆဲရ။.
နောက်တဖန်တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကိုယ်တိုင်လာပြီး Code Jean တစ်ခုလုံးဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သောဖခင် Jean-Vincent Scheil မှဆောင်းပါး ၂၈၂ ခုခွဲခဲ့သည်။ Hammurabi Code ၏ကွဲပြားခြားနားသော "ဆောင်းပါးများ" သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၏ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းများကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ သူတို့ကအထူးသဖြင့်အုပ်ချုပ်:
• ကုမ္ပဏီ၏စားပေး: သုံးအုပ်စုများတည်ရှိအခမဲ့ယောက်ျား, လက်အောက်ငယ်သားများနှင့်ကျေးကျွန်
•စျေးနှုန်းများ - ဆရာ ၀ န်များ၏အခကြေးငွေသည်အခမဲ့သို့မဟုတ်ကျွန်တစ် ဦး အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်
•လုပ်အားခ: သူတို့ကအလုပ်၏သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်. ကွဲပြား
•ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တာ ၀ န်ယူမှု - အိမ်ဆောက်ပြီးသူနေထိုင်တဲ့နေရာမှာပြိုကျပြီးသေစေခဲ့တဲ့ဗိသုကာတစ်ယောက်ကိုသေဒဏ်ချမှတ်ခြင်း
•တရားစီရင်ရေး function ကို: တရားမျှတမှုတရားရုံးများကအုပ်ချုပ်သည်နှင့်ရှင်ဘုရင်ထံသို့အယူခံဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်, ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတိကျမ်းစာ၌လာသည်ရပါမည်
•ပြစ်ဒဏ်များ: ပြစ်ဒဏ်များတစ်စကေးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်မှုများကိုအောက်ပါမှတ်တမ်းတင်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအက်ဥပဒေ၏လက်တုံ့ပြန်မှုကဒီစကေးအပေါ်အခြေခံသည်။
1 ။ အကြင်သူသည်ပိတ်ပင်ထားရရန်ကြံစည်မှုအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုကြာပေမယ့်သေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်ပါလိမ့်မယ်, ကသက်သေမပြနိုင်ပါ။
လူကိုပြစ်မှားသောသူမည်သည်ကား၊ မြစ်ကိုကူးလျှင်၊ မြစ်ထဲသို့ကူးလျှင်သူသည်သူ၏အိမ်ကိုသိမ်းယူလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မြစ်သည်စွပ်စွဲခံရသူတွင်အပြစ်မရှိကြောင်း၊ သူသည်ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲထွက်ပြေးသွားကြောင်းသက်သေပြလျှင်၎င်းအားစွပ်စွဲခံရသူကိုသေစေရမည်။ မြစ်ထဲသို့ခုန်ဆင်းသူကိုမူသိမ်းယူလိမ့်မည်။ မိမိအစွပ်စွဲပိုင်အိမ်။
၃။ အကြီးအကဲများရှေ့တွင်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းသက်သေပြခြင်းမပြုသူမည်သူမဆိုသည်ကြီးလေးသောပြစ်မှုဖြစ်ပါကအသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်။
၅။ တရားသူကြီးတစ် ဦး သည်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရေးသားပါက၊ အကယ်၍ နောက်ပိုင်းတွင်ဤဆုံးဖြတ်ချက်၌အမှားအယွင်းရှိလျှင်သူ့အမှားကြောင့်သူသည်အမှု၌သူချမှတ်သောဒဏ်ငွေကိုဆယ့်နှစ်ဆပေးလိမ့်မည်၊ သူ၏တရားသူကြီးနေရာကိုလူသိရှင်ကြားချပြလိမ့်မည်၊ တရားမျှတမှု။
6 ။ သောသူမည်သည်ကား, ဗိမာန်တော်သို့မဟုတ်တရားရုံးပိုင်ဆိုင်သောအရာကိုခိုးယူသေခြင်းအဖြစ်လက်ခံထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမဖြစ်စေ၊ နွားဖြစ်စေ၊ သိုးအစရှိသောဥစ္စာတစုံတခုကိုမရောင်းနှင့်။ ၎င်းကိုသိမ်းယူပြီးသူခိုးအဖြစ်ယူမှတ်ကာသတ်ပစ်လိုက်သည်။
၈။ တိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ်သိုးခြံဝင်းမှခိုးသောသူသည်၊ ဘုရားသို့မဟုတ်ခုံရုံး၏ပိုင်ဆိုင်သောမြည်း၊ ဝက်၊ ဆိတ်တို့ခိုးယူလျှင်ဘုရင်အားလွတ်မြောက်သူဖြစ်လျှင်သုံးဆ (၁၀) ဆပေးရမည်။ ; သူခိုးသည်မပေးနိုင်လျှင်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်။
ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးပြီးသူတစ် ဦး ဦး ၏ပိုင်ဆိုင်ရာကိုတွေ့ရှိသူမည်သူမဆို -“ ကုန်သည်တစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားရောင်းလိုက်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်သည်မျက်မြင်သက်သေများ၏မျက်မှောက်၌ငွေပေးချေရမည်” ဟုပိုင်ရှင်ကပြောပါသည်။ ငါ၏သက်သေဖြစ်လိမ့်မည်။ သက်သေဖြစ်လိမ့်မည်။ ” ထို့နောက်ဝယ်သူက၎င်းကိုရောင်းသည့်ကုန်သည်နှင့်သူမဝယ်ယူမီမျက်မြင်သက်သေများကပိုင်ရှင်ကသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခွဲခြားနိုင်သည့်မျက်မြင်သက်သေများကိုထုတ်လုပ်သည်။ တရားသူကြီးကသူတို့၏သက်သေခံချက်ကိုစစ်ဆေးသည်။ အရာဝတ္ထုအားငွေမပေးမီမျက်မြင်သက်သေများနှင့်ကျိန်ဆိုခြင်းအောက်၌ပျောက်ဆုံးသွားသောပစ္စည်းကိုဖော်ထုတ်သူများ။ ထို့နောက်သူသည်ကုန်သည်သည်သူခိုးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးသူသည်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရသည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသောပစ္စည်း၏ပိုင်ရှင်ကသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရှာပြီးဝယ်သူကကုန်သည်၏ပစ္စည်းမှသိမ်းဆည်းထားသောငွေကိုတွေ့သည်။
၁၀။ အကယ်၍ ပိုင်ရှင်သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သက်သေများကိုမထုတ်နိုင်လျှင်၎င်းကိုဝယ်။ ဝယ်မည်ဆိုပါကပိုင်ရှင်ကသက်သေကိုသက်သေပြနိုင်ပါကသူခိုးသည်သူခိုးဖြစ်ပြီးအသေသတ်ခြင်းကိုခံရသည်။ ပျောက်ပစ္စည်းကိုပြန်လည်ရယူခြင်း။
၁၁။ ပိုင်ရှင်ကပျောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းကိုသက်သေအဖြစ်သက်သေမပြနိုင်ရင်သူဟာရာဇ ၀ တ်သူဖြစ်တယ်၊
၁၂။ မျက်မြင်သက်သေများလက်မခံလျှင်တရားသူကြီးကခြောက်လကြာသည်။ ခြောက်လအကုန်တွင်သူ၏မျက်မြင်သက်သေများကိုမတွေ့ရပါကသူသည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်ပြီးသူသည်ဒဏ်ငွေချမှတ်ခြင်းခံရသည်။
၁၅ ယောက်ျား၏ကျွန်ဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ကျွန်ယောက်ျားမိန်းမကိုမြို့တံခါးမှထုတ်။ ၊
၁၇ ကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမကိုခေါ်။ ၊ သခင်ထံသို့ပြန် လာ၍၊ ငွေနှစ်ပိreceiveာအဘိုးကိုလျော်ရမည်။
၁၈ ကျွန်သည်သခင်၏နာမကိုမမြွက်လျှင်၊ သခင်သည်ထိုအိမ်ကိုအိမ်၌ခေါ်။ ၊ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ပေါ်လျက်, ကျွန်သည်မိမိသခင်ထံသို့ပြန်သွားသည်။
၁၉ ကျွန်သည်အိမ်၌ နေ၍၊ ထိုတွင်းကိုတွေ့မိလျှင်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်။
၂၀ အကယ်၍ သူလွတ်မြောက်သွားသောကျွန်သည်ကျွန်၏ပိုင်ရှင်များကိုကျိန်ဆိုပြီးအပြစ်ရှိသည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
၂၁ အိမ်ကိုထွင်းသောသူမည်သည်ကား၊ အသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်။
22 ။ တစ်ဦးလုယက်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ဖမ်းမိသူသည်မည်သူမဆို, အသေသတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
၂၃။ အကယ်၍ သူခိုးကိုမဖမ်းမိပါက၊ သူခိုးသည်သူ၏အရှုံးပမာဏကိုကြေငြာမည်။ ထို့နောက်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် […] မြေ၊ နယ်မြေသို့မဟုတ်ဒိုမိန်းပေါ်တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်အခိုးခံရသောကုန်ပစ္စည်းများကိုလျော်ကြေးပေးသည်။
၂၄။ လူတွေခိုးခံရတဲ့အခါ၊ ရပ်ရွာကမိသားစုတွေကို […] ပိုက်ဆံတစ်ပေါင်ပေးတယ်။
* (တစ်ဦးကမိုင်း # 500 ဂရမ်
အခွက်တဆယ် = 60 မိုင်း; မိုင်း = 60 NIS)
၂၅ အိမ်တအိမ်၌ မီးလောင်၍ ထိုမီးကိုအဘယ်သူမျှမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏။ အိမ်ရှင်၏ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယူ မိ၍ သူသည်မီးထဲ၌ထည့်ပြီးလျှင်၊
၂၆။ ဘုရင်၏အမှုဆောင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်အမိန့်ပေးခံရသည့်အရာရှိသို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သည်ထိုနေရာသို့မသွားဘဲကြေးစားငှားရမ်းကာအပိုဆုကြေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါကသူသည်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရပြီးသူ့ကိုကိုယ်စားပြုသူကပိုင်ဆိုင်သည်။ သူ့အိမ်က။
၂၇။ ဘုရင်၏ကံမကောင်းမှုကြောင့်အရာရှိတစ် ဦး သို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး အားဖမ်းဆီးရမိသည့်အခါသူ၏လယ်ယာများနှင့်ဥယျာဉ်များကိုအပိုင်သိမ်းထားသူအားပေးအပ်လျှင်၊ သူပြန်လာသောအခါမိမိလယ်၊ ဥယျာဉ်များကိုပြန်ပေးလျှင်သူ အဲဒါပြန်လုပ်ယူ
28 ။ အရာရှိတစ်ဦးသို့မဟုတ်စစ်သားမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးညျရှငျဘုရငျအားဖြင့်အကျဉ်းသားခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်နှင့်သားတော်အဓိကကြောင်း, ထို့နောက်လယ်ပြင်နှင့်ဥယျာဉ်သူ့ကိုပေးကြလိမ့်မည်သည့်အခါသူသည်မိမိအဘ၏လက်မှဝင်ငွေရရှိသွားတဲ့။
၂၉ သားသည်ငယ်သော်လည်း၊ ဥစ္စာကိုမယူနိုင်လျှင်၊ လယ်၌ဥယျာဉ်သုံးစုကိုရွယ်ရလိမ့်မည်။
အရာရှိတစ် ဦး သို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သည်သူ၏အိမ်၊ လယ်၊ ခြံ၊ ဥယျာဉ်မှထွက်ခွာ။ ငှားရမ်းပြီးအခြားသူတစ် ဦး ဦး ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးသုံးနှစ်ကြာလျှင်ပထမပိုင်ရှင်ကသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြန်လည်တောင်းခံလျှင်၊ သူတို့သည်ပြန်။ မလာကြ။
၃၁ သူသည်တနှစ်နှင့်တနှစ်နေလျှင်၊ သူ၏အိမ်၊ လယ်ယာ၊ ဥယျာဉ်များကိုငှါးပြန်လျှင်၊ တဖန် ပြန်၍ အပိုင်ရလိမ့်မည်။
၃၂။ အရာရှိတစ် ဦး သို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သည်ဘုရင်၏အမှုတော်တွင်အကျဉ်းချခံနေရပြီးကုန်သည်တစ် ဦး သည်သူ၏လွတ်မြောက်မှုကိုဝယ်ယူပြီးအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်လာသောအခါ၊ သူ၌လွတ်လပ်မှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရွေးရန်အိမ်၌နည်းလမ်းရှိလျှင်၊ သူ့အားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရန်အိမ်တွင်ဘာမျှမရှိပါကသူသည်သူ့အသိုင်းအဝိုင်း၏ဗိမာန်တော်မှရွေးနုတ်ခံရလိမ့်မည်။ ဗိမာန်တော်ကသူ့အားပြန်လည်မပေးဆပ်နိုင်လျှင်တရားရုံးသည်သူ၏လွတ်လပ်မှုကိုရွေးနှုတ်သည်။ သူ၏လယ်ကွင်းများ၊ ဥယျာဉ်ခြံများနှင့်အိမ်များကိုသူ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ရန်မပေးပါ။
33. အရာရှိတစ် ဦး သို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သည်ဘုရင့်အထံတော်မှထွက်ခွာ။ သူ၏အရာ၌ကြေးစားတစ်စောင်ပို့သော်လည်းအငြိမ်းစားကိုရုပ်သိမ်းသည့်အခါအရာရှိသို့မဟုတ်စစ်သားကိုသေဒဏ်ပေးသည်။
၃၄။ အရာရှိတစ် ဦး သို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သည်ကပ္ပတိန်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပျက်စီးစေသည့်အခါထိုသူအားဒဏ်ရာရရှိစေခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရင်ထံမှပေးသောလက်ဆောင်ကိုယူသောအခါအရာရှိသို့မဟုတ်စစ်သည်သည်သေသည်။
35 ။ ရှငျဘုရငျသဖွငျ့အရာရှိများမှပေးထားသောတိရစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်သိုးဝယ်ယူမည်သူမဆို, သူ့ပိုက်ဆံကုန်ပါတယ်။
၃၆။ အရာရှိတစ် ဦး၊ စစ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်ဆင်ဆာသမားများ၏လယ်ကွင်းများ၊ ဥယျာဉ်များနှင့်အိမ်များကိုမရောင်းနိုင်ပါ။
37. လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ အရာရှိ၏အိမ်ကိုဝယ်သောသူမည်သည်ကား၊ စစ်သူရဲ၊ စစ်သူရဲတယောက်သည်အခွန်ရ။ ၊ လယ်ကွင်းများ၊ ဥယျာဉ်များနှင့်အိမ်များသည်သူတို့၏ပိုင်ရှင်များထံပြန်သွားကြသည်။
အရာရှိတစ် ဦး၊ စစ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်ဆင်ဆာလုပ်သူတစ် ဦး သည်သူ၏ဇနီးသို့မဟုတ်သူ၏သမီးကိုလယ်၊ ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်အိမ်တစ်အိမ်တွင်မိမိ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးကိုသူ၏ဇနီးသို့မဟုတ်သမီးအားမပေးသင့်ပါ၊
39 သို့ရာတွင်သူသည်မိမိဇနီးသို့မဟုတ်သမီးကိုလယ်၊ ဥယျာဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သူဝယ်ယူပြီးသူပိုင်ဆိုင်သည့်အိမ်ကိုလွှဲအပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အကြွေးအတွက်အာမခံအဖြစ်ပြန်ပေးနိုင်သည်။
သူသည်လယ်၊ ဥယျာဉ် (သို့) အိမ်ကိုကုန်သည် (သို့) အခြားအများပြည်သူဆိုင်ရာအရာရှိတစ် ဦး ထံဝယ်သူသည်ထိုလယ်၊ ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်အိမ်မှဝင်ငွေကိုဆက်လက်ရောင်းချနိုင်သည်။
41. လယ်ကိုခြံစည်းရိုးတိုင်း၊ ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်အရာရှိတစ် ဦး ၏အိမ်၊ စစ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်သူသည်လောင်းကြေးများကိုပေးသည်။ အရာရှိ၊ စစ်သားသို့မဟုတ်ဆင်ဆာအဖွဲ့ကသူ့လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ အိမ်နှင့်သူ့အိမ်သို့ပြန်လာပါကသူ့အားပေးအပ်ထားသောလောင်းကြေးသည်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာသည်။
42. လယ်၌ရှိသောသူသည်လယ်လုပ်ခြင်း၊ စပါးရိတ်ခြင်းအလျှင်းမရှိလျှင်၊ လယ်၌မလုပ်နိုင်သောသက်သေကိုရသည်မှန်လျှင်၊ ကြီးထွားလာတယ်။
၄၃ ထိုလယ်ကိုမထီလေးစားပြုလျှင်၊ အိမ်ရှင်သည်မိမိအိမ်နီးချင်း၏ဥစ္စာကိုရောင်းသဖြင့်၊ လယ် လုပ်၍ မျိုးစေ့ကြဲပြီးမှ၊
ပျင်းရိသည်ဖြစ်စေ၊ ပျင်းရိသောသူသည်လယ်ကိုထွန်။ လေးနှစ်အတွင်းတွင်မျိုးစေ့ကိုကြဲ။ မြက်ကိုထိမ်းမြားရမည်။ ပိုင်ရှင်ထံသို့ပြန်ပေးရမည်။ စတုရန်းမီတာလျှင်စပါး 44 လီတာ။
လူတစ် ဦး သည်လယ်မြေကိုသတ်မှတ်ထားသောဈေးဖြင့်ငှားပြီးစုစုပေါင်းကောက်ခံပါကရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းကြောင့်သီးနှံများကိုပျက်စီးစေသည့်အခါမြေဆီလွှာစိုက်ပျိုးသူမှထိခိုက်ပျက်စီးစေသည်။
47. အကယ်၍ ပထမနှစ်တွင်စိုက်ပျိုးသူမအောင်မြင်ပါကသူသည်အခြားသူများမှမြေဆီလွှာရရှိပါကပိုင်ရှင်ကကန့်ကွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ - လယ်ယာမြေကိုစိုက်ပျိုးပြီးရိတ်သိမ်းခြင်းကိုရိတ်သိမ်းသည်။ သဘောတူညီချက်
၄၈။ ချေးငှားသူနှင့်စပါးကိုမိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်သီးနှံမအောင်မြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေမရှိသောကြောင့်စပါးမပေါက်သူမည်သူမဆိုယခုနှစ်ကြွေးရှင်ကိုပေးစရာမလိုပါ။ အဲဒီမှာသူကရေထဲမှာအကြွေးတက်ဘလက်ကိုရှင်းလင်းနှင့်ထိုနှစ်အဘို့အဘယ်သူမျှမပေးချေ။
အကြင်သူသည်ကုန်သည်ထံမှငွေကို ယူ၍ ကုန်သည်ကိုလယ်လုပ်စရာကောင်းသောစပါးသို့မဟုတ်နှမ်းလယ်ကိုပေးမည်။ လယ်၌စပါး၊ နှမ်းကိုစိုက်။ စပါးရိတ်ရန်အမိန့်ပေးသူမည်သူမဆို၊ အကယ်၍ လယ်သမားသည်လယ်၌စပါးသို့မဟုတ်နှမ်းကိုစိုက်လျှင်စပါးရိတ်ချိန်တွင်စပါးသို့မဟုတ်နှမ်းသည်ကုန်သည်ထံမှရရှိသောငွေနှင့်လဲလှယ်ရန်လယ်သမား၏ပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်သည်စပါးပုံစံကိုစိတ်ဝင်စားသူ၊ သူသည်လယ်သမား၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုကုန်သည်အားပေးသည်။
၅၃။ မိမိ၏ရေကာတာအားကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားရန်ပျင်းရိလွန်း။ မထိန်းသိမ်းသူ၊ ဆည်ကျိုး။ လယ်ကွင်းအားလုံးရေကြီးခြင်း၊ ဖောက်ဖျက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဆည်၏ပိုင်ရှင်အားငွေနှင့်ရောင်းမည်။ ပေါင်းလဒ်ကဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသောစပါးကိုလျော်ကြေးပေးသည်။
လူတစ် ဦး သည်ရေထဲသို့ ၀ င်လာပြီးအိမ်နီးချင်းစိုက်ခင်းများသို့စီးကျသောအခါစတုရန်းမီတာလျှင်ဂျုံ ၈ လီတာပေးသည်။
၅၇။ သိုးထိန်းတစ် ဦး သည်လယ်ပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ၊ သိုးပိုင်ရှင်မသိဘဲလယ်ကွင်းတွင်သိုးများကိုကျက်စားခွင့်ပြုလျှင်သိုးပိုင်ရှင်၏အသိကိုမသိဘဲလယ်ပိုင်ရှင်သည်သူ၏သီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်စားကျက်သိုးထိန်း လယ်သမားသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသူ၏နွားသည်စတုရန်းမီတာလျှင် ၁၆ လီတာစပါးကိုပေးသည်။
58. သိုးစုသည်သူတို့၏ကျက်စားရာနေရာများကိုစွန့်ခွာပြီးဘုံတံတိုင်း၌သော့ခတ်ထားသည့်အခါမြို့တံခါးများ၌သူတို့ကိုလယ်ကွင်းတွင်ကျက်စားစေသည့်သိုးထိန်းတစ် ဦး သည်ထိုလယ်ယာအတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်စပါး ၄၈ လီတာပေးရမည်။ စတုရန်းမီတာလျှင်။
အကြင်သူသည်ဥယျာဉ်မှူးအားလယ်ကို ပေး၍ ဥယျာဉ်၌စိုက်ပျိုးစေခြင်းငှါစီရင်ပိုင်သောသူသည်ထိုဥယျာဉ်ကိုပြုစု။ လေးနှစ်တိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ပြီးမှ၊ ပဥ္စမနှစ်တွင်မိမိမြေကိုနှစ်ပိုင်း ခွဲ၍ ပိုင်ရှင်သည်သိမ်းယူလိမ့်မည်။ သူ့ဘက်မှဂရုစိုက်ပါ။
အကယ်၍ သူသည်သူအားဥယျာဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်အပ်နှင်းထားသည့်လယ်ကိုစိုက်။ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်မြေမဟုတ်ပါကဥယျာဉ်မှူးသည်ပိုင်ရှင်မှထွက်ခွာ။ နှစ်ပေါင်းများစွာလယ်ကွင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ပေးဆောင်သည်။ အိမ်နီးချင်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုကို အခြေခံ၍ လယ်မြေများကိုမြေသြဇာကောင်းအောင် လုပ်၍ ပိုင်ရှင်ထံပြန်ပို့ပါ။
63 ။ သူစိုက်ပျိုးပြည်သို့တစ်မြေယာထဲ့အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပိုင်ရှင်မှပြန်ဆိုပါကတစ်နှစ်တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် 8 လီတာသူ့ကိုချေ။
65 ။ ဥယျာဉ်မှူးဥယျာဉ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရငျ, ကအိမ်နီးချင်းဥယျာဉ်မှအချိုးအစားအတွက်ပေးဆောင်။
၁၀၀ ... ထိုငွေပမာဏအပေါ်သူအတိုးနှုန်းမည်မျှရရှိသည်ဖြစ်စေသူသည်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုပေးရမည်ဖြစ်ပြီးကုန်သည်တစ် ဦး သည်သူတို့ကောက်ချက်ချသည့်နေ့တွင်ကုန်သည်ကိုပေးချေရမည်။
၁၀၁။ အကယ်၍ ထိုနေရာသည်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းကိုခွင့်မပြုပါကသူသည်လက်ခံရရှိသည့်ငွေပမာဏကိုပွဲစားသို့ကုန်သည်သို့ပေးရမည်။
၁၀၂။ ကုန်သည်တစ် ဦး သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ပွဲစားတစ် ဦး အားငွေအပ်နှင်းပြီးပွဲစားသည်သူသွားသောနေရာများတွင်ဆုံးရှုံးမှုကိုခံရသောအခါကုန်သည်၏မြို့တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရမည်။
၁၀၄။ ကုန်သည်တစ် ဦး သည်စပါး၊ သိုးမွေး၊ ဆီနှင့်အခြားတန်ဖိုးများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပွဲစားတစ် ဦး အားအပ်နှင်းသောအခါပွဲစားသည်ငွေပမာဏကိုပြေစာ ပေး၍ ကုန်သည်ထံအပေါင်ပစ္စည်းပေးချေသည်။ ထို့နောက်ကုန်သည်ထံမှသူပေးသောငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိသည်။
105 ။ အဆိုပါပွဲစားပေါ့ပေါ့ဆဆနှင့်ကုန်သည်မှပေးဆောင်ပမာဏတစ်ခုလက်ခံရရှိခံယူမပါဘူးဆိုရင်, သူတစ်ပုပ်ကိုလက်ခံရရှိမရဘူး, သူ့အဖြစ်ကဒီပေါင်းလဒ်စဉ်းစားပါ။
အကယ်၍ ပွဲစားသည်ကုန်သည်ထံမှငွေကိုလက်ခံသော်လည်းသူနှင့်ငြင်းခုံရန်ငြင်းဆန်လျှင် (လက်ခံသူကိုငြင်းဆိုပါက) ကုန်သည်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင်ကျိန်ဆိုပြီးသူသည်၎င်းငွေကိုပွဲစားသို့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသက်သေပြပြီးသူထံသို့ပြန်ပေးရမည်။ သုံးဆ။
၁၀၇။ အကယ်၍ ကုန်သည်သည်ပွဲစားကိုလှည့်စားလျှင်သူသည်သူအားပေးခဲ့သမျှကိုပြန်ပေးခဲ့သော်လည်းကုန်သည်သည်သက်ဆိုင်ရာလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးရန်ငြင်းဆန်ပါကပွဲစားသည်ကုန်သည်ကိုဘုရားသခင်နှင့်တရားသူကြီးများရှေ့မှောက်တွင်ဆင့်ခေါ်သည်။ ကုန်သည်သည်ပွဲစားမှရရှိသောအရာများကိုလက်ခံရရှိခြင်းကိုဆက်လက်ငြင်းဆိုပါကထိုသူအားပေးရမည့်ငွေပမာဏကိုခြောက်ဆပေးရမည်။
စားဖွယ်တည်းခိုသူတစ် ဦး သည်သောက်သုံးရန်အတွက်စုစုပေါင်းအလေးချိန်ရှိသောဂျုံကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်သော်လည်းငွေယူပြီးအချိုရည်သည်ဆန်ထက်နိမ့်သောအခါသူသည်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံရသည်။ ရေမှာ။
109. ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည်တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင်တွေ့ဆုံကြပြီး၎င်းတို့အားဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းသို့မရောက်ပါက၊ ပိုင်ရှင်သည်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရသည်။
အကယ်၍“ ဘုရား၏အစ်မ” သည်တည်းခိုခန်းတစ်ခုဖွင့်လျှင်၊ တည်းခိုခန်းသို့ဝင်လျှင်သူမအသက်ရှင်သည်ကိုမီးရှို့ရမည်။
111 ။ proprietress ဘီယာခြောက်ဆယ်လီတာကိုထောက်ပံ့ပေးလိုလျှင် ... သူမစပါးရိတ်ရာကာလမှာစပါးငါးဆယ်လီတာကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။
ခရီးသည်တစ် ဦး သည်အခြားငွေ၊ ရွှေ၊ အဖိုးတန်ကျောက်များသို့မဟုတ်အခြားလွှဲပြောင်းနိုင်သောအခြားအရာများကိုအပ်နှင်းပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန်ရည်ရွယ်သည့်အခါ၊ အကယ်၍ အငြင်းပွားမှုသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုပြန်ပေးသည့်နေရာသို့ပြန်မပို့ပါက၊ သူကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပါကသူသည်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခံရပြီးသူ့အားအပ်နှင်းထားသည့်ငါးကြိမ်ပေးဆပ်ရမည်။
သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ငွေကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ပိုင်ရှင်၏အသိပညာမရှိဘဲစပါးကျီသိုလှောင်ရုံမှထွက်ခွာသူမည်သူမဆိုစပါးကျီမှသိုမဟုတ်သိမ်းဆည်းထားသူအားပိုင်ရှင်၏ဗဟုသုတမပါဘဲထွက်ခွာသွားလျှင်ထိုသူအားစစ်ဆေးစီရင်ခြင်းခံရမည်။ သူသိမ်းယူခဲ့သောစပါးကိုပြန်ပေးရန်။ ထို့အပြင်သူသည်သူရရှိသောသို့မဟုတ်၎င်းမှရရှိသောမည်သည့်ကော်မရှင်မဆိုရှုံးသည်။
၁၁၄။ လူတစ် ဦး သည်အခြားတစ် ဦး အားငွေနှင့်ငွေကိုတောင်းခံ။ အတင်းအဓမ္မရယူရန်ကြိုးစားပါကငွေတစ်ပေါင်၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုပေးချေရမည်။
115 ။ လူတသည်အခြားဆန့်ကျင်နေတဲ့ကြွေးမြီဘောဇဉ်သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံရှိပါတယ်လျှင်, ထောင်ချ, ထိုသို့ထောင်ထဲမှာသဘာဝသေသော, အလုပျထုံးလုပျနညျးအပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁၆။ အကယ်၍ အကျဉ်းသားသည်ရိုက်နှက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရက်စက်စွာနှိပ်စက်ခြင်းတို့ကြောင့်ထောင်ထဲမှာသေဆုံးလျှင်အကျဉ်းသား၏သခင်သည်ကုန်သည်ကိုတရားသူကြီးရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သည်။ လွတ်လပ်သောသူဖြစ်ပါ၏။ ကုန်သည်၏သားသည်အသေခံရမည်။ သူသည်ကျွန်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ကုန်သည်သည်ရွှေတစ်ပေါင်၏သုံးပုံတစ်ပုံကို ပေး၍ အကျဉ်းသား၏သခင်ပေးသမျှကိုပြန်လည်ပေးဆပ်သည်။
အကြွေးကိုမလေးမစား။ မိမိနှင့်သူ၏ဇနီး၊ သား၊ သမီးတို့ကိုငွေနှင့်ရောင်းစားသူသို့မဟုတ်အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းသူမည်သူမဆိုထိုသူသည်သူနှင့်အတူသုံးနှစ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ဝယ်ယူခြင်း, စတုတ္ထနှစ်တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမကိုအတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းခြင်း၊ ကုန်သည်သည်ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းရန်ရှိပါကကန့်ကွက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
အကြင်သူသည်အကြွေးကိုမရိုမသေ ပြု၍၊ သူတပါးအားပေး စား၍ သားသမီးတို့အားပေးစားသောမိန်းမကိုရောင်းလျှင်၊ ကုန်သည်ရောင်းသောသူသည်အခကို ပေး၍ သခင်၏ကျွန်သည်ပြန်ပေးရမည်။
လုံခြုံမှုအတွက်အခြားသူနှင့်စပါးကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသူ၊ ကောက်ပဲသီးနှံပျက်ဆီးခြင်း၊ သို့မဟုတ်အိမ်ပိုင်ရှင်သည်ထပ်ခိုးကိုဖွင့ ်၍ ထုတ်ယူသည်သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်အိမ်၌စပါးကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းကိုငြင်းပယ်သူကမိမိအားပြောကြားသည် ဘုရားသခင့်ရှေ့မှာကောက်ပဲသီးနှံကိုအိမ်ရှင်ပိုင်ရှင်ကသူသိမ်းယူခဲ့သောစပါးအားလုံးအတွက်ပြန်လည်ပေးလျော်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်စပါးကိုသိုလှောင်ထားသူမည်သူမဆိုတစ်နှစ်လျှင် ၅ မှ ၃၀၀ နှုန်းဖြင့်ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်ပေးချေသည်။
122 ။ တတိယပါတီငွေ, ရွှေ, သို့မဟုတ်အခြားအပ်နှံရန်လိုသူမည်သူမဆို, အခြို့သကျသခေံဖို့အရာရာကိုတင်ပြမယ့်စာချုပ်တက်ဆွဲ, ပြီးတော့လုံခြုံရာဌာန၌နေရာချထားဘို့အရာအားလုံးပြုရမည်။
ငွေ၊ ရွှေ၊ သို့မဟုတ်အခြားတို့ကိုတတိယပါတီသို့လွှဲအပ်သူ၊ သက်သေမခံမီသက်သေအထောက်အထားမတိုင်မီလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတွင်အပ်နှံသူသည်တရားသူကြီးရှေ့သို့ဆွဲငင်ခံရပြီးငြင်းဆန်သောအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ပေးရမည်။
၁၂၅။ အကြင်သူသည်မိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုအတွက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ထားရှိပြီးသူခိုးများသို့မဟုတ်ဖောက်ထွင်းသူများကဖြစ်စေသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ထိန်းသိမ်းထားသူနှင့်အတူတူပင်တစ်ချိန်တည်းမှာပျောက်ဆုံးမှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ပိုင်ရှင်ကသူအပ်နှင်းထားသမျှကိုလျော်ကြေးပေးရမယ်။ ခိုးယူထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေ။ ပြန်လည်ရယူရန်အတွက်အုပ်ထိန်းသူမှရွေးချယ်သည်။
မိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆုံးရှုံးသောသူက၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေငြာပြီးမှားယွင်းသောကြေငြာချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားလျှင် - သူသည်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုဘုရားသခင့်ရှေ့မှောက်သို့တိုင်ကြားလျှင်၊ ယင်း၏ပြောဆိုချက်ကို၏အတိုင်းအတာအထိငွေကြေးပြန်လည်။
ဘုရားသခင့်နှမသို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏မယားကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချ။ သက်သေမပြလျှင်မည်သူမဆိုတရားသူကြီးများရှေ့သို့ယူဆောင်။ နဖူး၌တံဆိပ်ခတ်ရမည်။
အကယ်၍ ယောက်ျားတ ဦး ၏ဇနီးကိုအခြားသူတစ် ဦး နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖမ်းမိပါကထိုသူနှစ် ဦး သည်ရေထဲသို့ချည်နှောင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်းယောက်ျားသည်သူ၏ဇနီးနှင့်ဘုရင်၏ကျွန်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။
131. အကယ်၍ လူသည်အခြားသူ၏ဇနီးကိုစွပ်စွဲသော်လည်းသူသည်အခြားယောက်ျားနှင့်မအံ့သြပါက၊ ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုရမည်။ အိမ်ပြန်နိုင်သည်။
132. အကယ်၍ လူတ ဦး ကအခြားတ ဦး ၏ဇနီးကိုစွပ်စွဲပြီးအခြားယောက်ျားကိုအံ့အားသင့်စေပါကသူမခင်ပွန်းအတွက်မြစ်ထဲနစ်မြှုပ်ရမည်။
လူသည်စစ်တိုက်ရာတွင်၎င်း၊ အိမ်၌စားစရာကို၎င်း၊ ဇနီးသည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစွန့်ပစ်လျှင်၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အခြားအိမ်သို့ပြန်သွားသောအခါသူသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရပြီးရေထဲသို့ပစ်ချခံခဲ့ရသည်။
၁၃၄။ ယောက်ျားသည်စစ်သုံ့ပန်းဖြစ်ပြီးအိမ်တွင်အစားအစာမရှိလျှင်၊ သူ၏ဇနီးသည်အခြားအိမ်သို့သွားလျှင်သူမအားအပြစ်မရှိဟုမှတ်ယူရမည်။
135. လူသည်စစ်တိုက်ရာတွင်၎င်း၊ စားစရာမရှိလျှင်၎င်း၊ သူ၏မယားသည်အခြားတပါးသောအိမ်သို့ သွား၍၊ သားသမီးရှိလျှင်၎င်း၊ နောက်မှသူမခင်ပွန်းအိမ်သို့ပြန်လျှင်၊ မိန်းမသည်မိမိခင်ပွန်းထံသို့ပြန်ရမည်။ သားတို့သည်အဘနှင့်အတူနေရစ်ကြ၏။
မိမိအိမ်ကိုစွန့ ်၍ ထွက်ပြေး။ ၊ မိမိမယားကိုအခြားအိမ်သို့သွားခွင့်ပြုသူမည်သူမဆိုအိမ်သို့ ပြန်၍ ကိုယ်မယားကိုပြန်သိမ်းလိုလျှင်၊ သူသည်မိမိအိမ်ကိုစွန့ ်၍ ထွက်ပြေးသွားသောကြောင့်ဤပြေးသူဇနီးသည်ပြန်လာမည်မဟုတ် သူမ၏ခင်ပွန်းအိမ်၌။
၁၃၇။ ယောက်ျားသည်သူ့ကိုပေးသောမိန်းမသို့မဟုတ်ကလေးများပေးသောဇနီးနှင့်ခွဲခွာလိုပါကသူသည်သူမ၏ဖှဲ့ * အပြင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း၏ဝေစုကိုဤမိန်းမထံပြန်ပို့ရမည်။ လယ်ပြင်၊ ဥယျာဉ်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ သူမကလေးများကိုပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သူသည်သားသမီးတို့ကိုကျွေးမွေးသော်လည်းသားသမီးတို့သည်သူတပါးထံ၌ကျွန်ခံရကြမည်။ သူမသည်ထို့နောက်သူမ၏စိတ်နှလုံး၏လူကိုလက်ထပ်နိုင်ပါတယ်။
က - စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးလက်ဆောင်: သတို့သမီး၏အဘအားအနာဂတ်သတို့သားကပေးအပ်;
ခ - သတို့သမီး၏အဘထံသို့ (မိသားစုအတွက်) ယူဆောင်လာသည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၊
c - ဖခင်ကသူ၏သမီးအားပေးသောဖိုး၊
- ဇနီးကိုလှူဒါန်းခြင်း။ ခင်ပွန်းသည်ကသူ၏ဇနီး၊ လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ အိမ်နှင့်လက်ဆောင်များကိုပေးအပ်သည့်ပစ္စည်း။
အကယ်၍ ယောက်ျားသည်မိမိအားမမွေးဖွားသေးသောဇနီးနှင့်ခွဲခွာလိုပါကသူမအနေဖြင့်ဖခင်ထံမှယူဆောင်ထားသောဖှဲ့များအပြင်သူမ၏စေ့စပ်လက်ဆောင်နှင့်ညီမျှသောငွေပမာဏကိုပြန်ပေးရမည်။ , သူမသွားကြကုန်အံ့။
139. စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလက်ဆောင်မရှိပါကသူသည် her ည့်သည်စာအုပ်နှင့်ငြင်းပယ်ခြင်းလက်ဆောင်ကိုပေးရမည်။
အိမ်တွင်နေထိုင်သောယောက်ျားတစ် ဦး ၏ဇနီးသည်သူမကိုစွန့်ခွာလိုလျှင်အကြွေးနစ်သွားလျှင်၊ သူမ၏အိမ်ကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားလျှင်၊ သူမ၏ခင်ပွန်းကိုလျစ်လျူရှု။ တရားစွဲဆိုလျှင်၊ သူမ၏လွတ်လပ်မှုကိုကမ်းလှမ်းသည်၊ သူမသွားနိုင်သည့်လမ်းကိုသွားနိုင်သည်။ သူမ၏ခင်ပွန်းကသူမ၏လွတ်လပ်မှုကိုငြင်းဆန်လျှင်၊ အခြားဇနီးတစ် ဦး ကိုထိမ်းမြားမည်ဆိုပါကသူမခင်ပွန်း၏အိမ်၌ကျွန်အဖြစ်ဆက်လက်နေထိုင်ရလိမ့်မည်။
အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်စကားများရန်ဖြစ်ပြီး“ မင်းကိုငါနဲ့အကျွမ်းတ ၀ င်ချစ်နေသူမဟုတ်ဘူး” လို့ပြောရင်သူမရဲ့စိတ်စွန်းကွက်မှုအကြောင်းရင်းကိုတင်ပြရမယ်။ သူမအပြစ်ရှိသည်မဟုတ်သော်လည်းသူမအမှားမကင်းပါ၊ သို့သော်သူသည်သူမကိုစွန့်ပစ်ပြီးလျစ်လျူရှုပါကအပြစ်ရှိသည်ဟုမခံစားရပါကသူမသည်သူမ၏ငွေတောင်းကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ အဖေ
143. အကယ်၍ သူသည်အပြစ်မရှိပါက၊ ခင်ပွန်းကိုစွန့ ်၍ အိမ်ကို ဖျက်ဆီး၍ သူ၏ခင်ပွန်းကိုလျစ်လျူရှုပါကဤမိန်းမကိုရေထဲသို့ပစ်ချသင့်သည်။
144 ။ လူသည်ဇနီးကြာနှင့်ဇနီးသူမ၏ခင်ပွန်းကျွန်ပေးသည်, သူ၏သားသမီးများပေးသည်, သို့သော်ဤယောက်ျားသည်အခြားဇနီးယူရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းကြောင်း, ဒီကခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းလျှင်၎င်း, ဒါကြောင့်ဒုတိယဇနီးမယူသင့်ပါတယ်။
ယောက်ျားသည်မိန်းမနှင့်စုံဘက်သည်ဖြစ်စေ၊ သူသည်သားကိုမပေးစားလျှင်၊ အခြားမိန်းမကိုသိမ်းယူခြင်းငှါသွားလျှင်၊ ဒုတိယမြောက်ဇနီးသည်မိမိအိမ်သို့ဆောင်သွားလျှင်၊ ပထမနှင့်တန်းတူ။
ယောက်ျားသည်မိန်းမနှင့်စုံဘက်။ ထိုမိန်းမကိုပေးပြီးလျှင်၊ သူသည်သားကိုဘွားလိမ့်မည်။ ဤမိန်းမသည်မိန်းမနှင့်ဆက်ဆံသဖြင့်၊ သူမ၏သခင်မသည်သူမအားငွေဖြင့်ရောင်း။ မရပါ။ သို့သော်သူမသည်ကျွန်အဖြစ်ထားကာသူမကိုအိမ်ဖော်များအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည်။
147. အကယ်၍ သူမအားကလေးမပေးခဲ့ပါကသူမ၏သခင်မသည်သူမ၏ငွေကိုရောင်းနိုင်သည်။
ယောက်ျားသည်မိန်းမကိုယူပြီးလျှင်သူသည်ဖျားနာလျှင်သူသည်ဒုတိယဇနီးနှင့်ထိမ်းမြားလိုလျှင်ဤရောဂါကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသောသူ၏ဇနီးကိုမလွှတ်ပေးရ။ သို့သော်သူ၌ရှိသောအိမ်တွင်သူမထားရှိရမည်။ သူမနေထိုင်ခဲ့သမျှကာလပတ်လုံးသူသည်သူမတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ယောက်ျားတစ် ဦး သည်မိမိဇနီးအားလယ်၊ ဥယျာဉ်၊ အိမ်တစ်အိမ်နှင့် အကယ်၍ လက်ဆောင်တစ်ခုပေးလျှင်၊ သူ့ခင်ပွန်းသေဆုံးပြီးနောက်သူ၏သားများမှဘာမှမတောင်းဆိုပါကအမေသည်သူမနှစ်သက်သောသားအားအရာရာကိုအမွေဆက်ခံနိုင်သည်။ နှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများကိုဘာမှစွန့်ခွာရန်ခညျြနှောငျမဟုတ်ပါဘူး
အမျိုးသားတစ် ဦး ၏အိမ်တွင်နေထိုင်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပါကအကြွေးမရှိသူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိစေရ။ ထို့ကြောင့်သူသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဤမိန်းမသည်ဤမိန်းမတွင်ကြွေးတင်သော်၎င်း၊ သို့သော်မိန်းမတစ် ဦး သည်သူမ၏အိမ်သို့မဝင်မီအကြွေးတင်နေပါကအကြွေးရှင်သည်သူ၏ခင်ပွန်းကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ပါ။
အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အမျိုးသားတစ် ဦး ၏အိမ်ထဲသို့ဝင်သောအခါ၎င်းတို့သည်အတူတကွအကြွေးတင်လျှင်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကုန်သည်ကိုပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
153. အကယ်၍ ယောက်ျားတစ် ဦး ၏ဇနီးသည်အခြားသူတစ် ဦး ၏မျက်နှာသာပေးမှုကြောင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုသတ်ပစ်လျှင်၎င်းတို့သည်နှက်တိုင်တင်ခံရလိမ့်မည်။
ယောက်ျားတစ် ဦး သည်မိမိ၏သမီးနှင့်သွေးဆောင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိပါကပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရမည်။
၁၅၅။ အကယ်၍ လူတ ဦး သည်သမီးတစ် ဦး အားမိမိ၏သားနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမည်ဟုကတိပေးပြီးသားကသူမနှင့်ပေါင်းဖက်လိုက်လျှင်ဖခင်သည်သမီးနှင့်အတူအိပ်ပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိပါကသူသည်ချည်နှောင်။ ရေထဲသို့ချပစ်လိမ့်မည်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး အားသူ့သားနှင့်လက်ထပ်မည်ဟုကတိပြုသော်လည်းသူမစားသုံးပါကသူမကသူမနှင့်အိပ်ပါကသူမအနေဖြင့်သူမ၏ရွှေပေါင်တစ်ဝက်ကိုပေးဆောင်ကာသူမအားယူဆောင်လာခဲ့သောအရာများအတွက်လျော်ကြေးပေးလိမ့်မည်။ အဖေဘက်ကအိမ်။ သူမသည်သူမ၏နှလုံးသား၏ယောက်ျားနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်လွတ်လိမ့်မည်။
157. အကြင်သူသည်မိမိအဘ၏သား၊ အမိနှင့်တူ၏။
158 ။ မည်သူမဆို, မိမိအဘ၏သား, သားသမီးဘွားမြင်သောသူသည်သူ၏ပထမဇနီးနှင့်အတူအံ့အားသင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူသည်မိသားစုအိမျမှနှင်ထုတ်ခံရပါလိမ့်မည်။
159 ။ မည်သူမဆို, သူ့ပထွေး၏အိမျ၌ကုန်ပစ္စည်းများကို လုပ်. , နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆုကြေးဇူးကိုပေးချေဘဲလျက် အကယ်. အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုရှာဖွေလျက်, သူ၏ဖခင်ကပြောကြားခဲ့သည်: "ငါသည်သင်တို့၏သမီးမလိုချင်ကြဘူး," ၏ဖခင် မိန်းကလေးခံရပြီသမျှသောထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
မည်သူမဆိုကုန်ပစ္စည်းများကိုသူ၏ယောက္ခမအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးစေ့စပ်လက်ဆောင်ကိုပေးဆပ်သူဖြစ်ပါက၊ နောက်မှမိန်းကလေး၏ဖခင်က "မင်းသမီးကိုမင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူး" လို့ပြောရင်သူယူဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုသူပြန်ပေးရမည်။
မည်သူမဆိုကုန်ပစ္စည်းများကိုသူ၏ယောက္ခမအိမ်သို့ယူဆောင်လာပြီးစေ့စပ်လက်ဆောင်ကိုပေးဆပ်လျှင်လည်းကောင်း၊ ထို့နောက်သူ၏အဆွေခင်ပွန်းကသူ့ကိုကဲ့ရဲ့။ ယောက္ခမက၊ သင်သည်ငါ့သမီးကိုမယားနှင့်မပေးစားလျှင်၊ သူသည်အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သောဥစ္စာတစုံတခုကိုမျှမပျောက်စေခြင်းငှါ၊ ဒါပေမယ့်သူ့စေ့စပ်ထားသူကမိတ်ဆွေကိုလက်မထပ်ရ။
ယောက်ျားသည်မိန်းမနှင့်စုံဘက်။ သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လျှင်၊ ထိုမိန်းမသေလျှင်အဘသည်မိမိသားကိုမပေးရ။
ယောက်ျားသည်မိန်းမနှင့်စုံဘက်။ သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လျှင်၊ သို့ဖြစ်လျှင်ဤမိန်းမသေလျှင်သူသည်ယောက္ခမ၏အိမ်၌ပေးသောအခကိုပေးသော်လည်း၊ သူ၏ခင်ပွန်းက၊ ထိုမိန်းမကိုမတောင်းနှင့်၊ ဒီအဖေဘက်ကအိမ်သူအိမ်သားပိုင်။
164 ။ အဘထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလက်ဆောင်ပမာဏကိုပေးချေခြင်းမရှိပါလျှင်ဖှဲ့နုတ်နှင့်အဖေဘက်ကအိမ်သို့ချိန်ခွင်လျှာပေးဆောင်နိုင်ပါ။
အကယ်၍ လူတ ဦး အနေဖြင့်မိမိအနှစ်သက်ဆုံးသားကိုလယ်၊ ဥယျာဉ်၊ အိမ်တစ်အိမ်နှင့် အကယ်၍ လက်ဆောင်ပေးသည်ဆိုပါကဖခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားလျှင်ညီအစ်ကိုများကပစ္စည်းဥစ္စာကိုခွဲဝေယူပါက၊ , သူကလက်ခံရမယ်, ထို့နောက်အဖေဘက်ကပိုင်ဆိုင်မှု၏ကျန်ခွဲဝေလိမ့်မည်။
ယောက်ျားသည်မိမိ၏သားအတွက်မယားများဝယ်ယူသော်လည်း၊ သူ၏သားငယ်အတွက်သတို့သမီးမရရှိပါကသေလျှင်၊ သားများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခွဲဝေလျှင်၊ မပိုင်ဆိုင်သောအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးအတွက်စေ့စပ်လက်ဆောင်တစ်ခုယူထားရမည်။ နောက်တဖန်သူ့ကိုမယားအာမခံနိုင်အောင်, ဇနီးကိုယူ။
ယောက်ျားသည်မိန်းမတစ် ဦး နှင့်ထိမ်းမြားပြီးသူသည်ကလေးများကိုပေးသည်ဆိုပါက - ဤဇနီးသည်သေလျှင်အခြားမိန်းမနှင့်လက်ထပ်ပြီးသူကကလေးများပေးသည်ဆိုပါကဖခင်ဖြစ်သူသေလျှင်ကလေးများသည်ခွဲခြားခြင်းမပြုရ။ မိခင်များအရပိုင်ဆိုင်မှုသည်သူတို့နည်းအားဖြင့်မိခင်၏ဖရုံကိုသာခွဲဝေပေးရသည်။ သူတို့ကသူတို့အကြားညီမျှအဖေဘက်ကပစ္စည်းဥစ္စာခွဲဝေပါလိမ့်မယ်
လူတစ် ဦး သည်မိမိ၏သားကိုအိမ်မှနှင်ထုတ်လိုလျှင်“ ငါ့သားကိုငါမောင်းထုတ်ချင်တယ်” ဟုတရားသူကြီးရှေ့တွင်ကြေငြာပါကတရားသူကြီးကသူ၏အကြောင်းပြချက်များကိုစဉ်းစားရမည်။ အကယ်၍ သားသည်ကြီးလေးသောစွန့်ခွာမှုအတွက်အပြစ်ရှိသည်ဟုမယူဆပါက၎င်းကိုတရား ၀ င်ထုတ်ပယ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သူသည်ကြီးလေးသောအမှားအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းဖော်ပြပါက၎င်းအားစစ်မှန်သောဆွေမျိုးသားချင်းအားဆုံးရှုံးစေနိုင်လျှင်ဖခင်သည်သူ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်လွှတ်ရမည်။ အကယ်၍ ဒုတိယအကြိမ်သူသည်ကြီးလေးသောအပြစ်ကျူးလွန်ပါကဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းအားလုံးမှကင်းလွတ်စေနိုင်သည်။
မိန်းမသည်ယောက်ျားနှင့်သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လျှင်၊ မိန်းမသည်သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လျှင်၊ အဘသည်မိမိသားကိုချီပိုက်။ ၊ ကျွန်မသားတို့ကိုခေါ်သဖြင့်၊ သူ၏မယားကား၊ သို့ဖြစ်လျှင်ဤအဘသေလျှင်၊ ဇနီး၏မယားနှင့်သမီးနှစ်ယောက်တို့သည်အဘ၏အမိ၊ သတို့သမီး၏သားသည်ဝေမျှပြီးရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အကယ်၍ ဖခင်သည်သူ၏တစ်သက်တာကာလအတွင်းသူ၏ကျွန်မှမွေးဖွားသောကလေးများကို“ ငါ့သား” ဟုမပြောခဲ့လျှင်၎င်းဖခင်ကွယ်လွန်လျှင်၊ ကျွန်မ၏ကလေးများသည်အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်မျှဝေခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။ မိန်းမနှင့်သူငယ်၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံရမည်။ သတို့သမီး၏သားတို့သည်ကျွန်မ၏သားကိုကျွန်ခံစေခြင်းငှါမပြုရ။ လင်သည်လက်ဆောင်ကို ပေး၍၊ သူ၏ခင်ပွန်းအိမ်၌နေလိမ့်မည်။ သူအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးဤအိမ်ကိုငွေမပေးနိုင်။ သူမကျန်ခဲ့သမျှကိုသူမကလေးများပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်။
172. အကယ်၍ သူမ၏ခင်ပွန်းကသူမကိုလက်ဆောင်မပေးခဲ့လျှင်၊ သူမသည်လက်ဆောင်တစ်ခုအနေဖြင့်လျော်ကြေးငွေကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီးသူမ၏ခင်ပွန်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအနေဖြင့်ကလေး၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ညီမျှသည်။ သူ၏သားတို့ကိုနှင်ထုတ်လျှင်၊ တရားသူကြီးအနေဖြင့်အရည်အချင်းများကိုစစ်ဆေးရမည်။ အကယ်၍ ကလေးများအပြစ်ရှိပါကဇနီးသည်ကသူမခင်ပွန်း၏အိမ်မှမထွက်သင့်ပါ။ အကယ်၍ ဇနီးဖြစ်သူသည်အိမ်မှထွက်ခွာလိုပါကသူမ၏ခင်ပွန်းကသူ၏သားတို့အားပေးသောအလှူငွေကိုစွန့်ခွာရမည်။ သူမသည်ထို့နောက်သူမ၏စိတ်နှလုံး၏လူကိုလက်ထပ်နိုင်ပါတယ်။
173. အကယ်၍ ဒီမိန်းမကသူမသွားခဲ့တဲ့အိမ်မှာဒုတိယမြောက်ခင်ပွန်းကိုပေးပြီးသေလျှင်၎င်းရဲ့ပထမနှင့်ဒုတိယကလေးများဟာသူမရဲ့ဖရုံကိုဝေမျှပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ဒုတိယမြောက်ခင်ပွန်းအားသူမပေးခဲ့လျှင်၊ သူမ၏ပထမခင်ပွန်း၏သားများသည်ဖဲများရရှိလိမ့်မည်။
၁၇၆။ သို့ရာတွင်ပြည်သူ့ကျွန်တစ် ဦး သို့မဟုတ်လွတ်မြောက်သူတစ် ဦး ၏ကျွန်သည်ယောက်ျား၏သမီးနှင့်လက်ထပ်လျှင်၊ သူမလက်ထပ်ပြီးနောက်သူသည်အဖေဘက်မှအိမ်ထောင်စုမှငွေကိုယူဆောင်လာပြီးနှစ် ဦး စလုံးပျော်မွေ့။ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုကိုရှာတွေ့လျှင်၊ ကုန်ပစ္စည်းစုဆောင်းလျှင်ကျွန်မူကားသေလျှင်လွတ်မြောက်သူသည်သူမ၏ငွေကိုပြန်ယူလိမ့်မည်။ သူနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းရရှိသမျှအားလုံးသည်သူမအတွက်နှစ်ပိုင်းခွဲဝေပေးရသည်။ တစ်ဝက်သည်ကျွန်သခင်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျန်တစ်ဝက်မှာအခမဲ့မွေးဖွားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကလေးများအတွက်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့မွေးဖွားသောအမျိုးသမီးသည်အခွန်ငွေကိုမရရှိပါကသူမနှင့်သူမခင်ပွန်းရရှိသမျှကိုယူပါလိမ့်မည်။ သခင်၏ဥစ္စာတစုံတခုကိုယူခြင်းငှါဆောင်ခဲ့ရမည်။
177. သားသမီးမထွန်းကားသေးသောမုဆိုးမသည်အခြားအိမ်တစ်အိမ်သို့ဝင်လိုလျှင်တရားသူကြီးကမသိဘဲသူမမသွားရပါ။ အကယ်၍ သူသည်အခြားအိမ်သို့ဝင်လျှင်တရားသူကြီးသည်သူမ၏ပထမဆုံးခင်ပွန်းအိမ်၏အခြေအနေကိုအရင်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ ဤအိမ်သည်ဒုတိယခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးကိုယ်တိုင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအပ်နှင်းခံရလိမ့်မည်။ ထိုအခါလုပ်ရပ်ထို့ကြောင့်ထူထောင်ပါလိမ့်မည်။ သူမသည်အိမ်ကိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ထားရှိရန်၊ ကလေးများအားပြုစုပျိုးထောင်ရန်နှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများရောင်းရန်မလိုပေ။ မုတ်ဆိုးမ၏အိမ်ကိုလုယူသိမ်းစားသောသူသည်၊ သူတို့ငွေကိုထုတ်။ မိမိတို့ပိုင်သောမြေသို့ပြန်ရမည်။
178. အကယ်၍ ခွဲခန့်အပ်ထားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သို့မဟုတ်ပြည့်တန်ဆာမသည်သူမဖခင်အားပေးအပ်ခြင်းနှင့်လက်ဆောင်ပေးခြင်းကိုပေးခဲ့သည့်ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး ဖြစ်ပါက၎င်းလက်ဆောင်တွင်သူမအလိုအတိုင်းသူမအနိုင်ရနိုင်သည်ဟုအတိအလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိလျှင်၊ သူမသည်သူမဖယ်ရှားပစ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်; သူ၏အဘသေလျှင်၊ သူ၏ညီအစ်ကိုတို့သည်လယ်ယာ၊ ဥယျာဉ်ကိုစိုက်လျက်စပါး၊ ဆီ၊ နို့ကိုသာပေးကြလိမ့်မည်။ သူ၏အစ်ကိုများကသူတို့အနေဖြင့်သူတို့၏ဆန်စပါး၊ ဆီနှင့်နို့ကိုမပေးဆပ်လျှင်သူတို့ရဲ့လယ်ယာနှင့်ဥယျာဉ်မှူးကသူတို့ကိုထောက်ပံ့သည်။ သူသည်လယ်မြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေအသုံးအဆောင်များနှင့်သူမအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးသူ့ဖခင်ပေးသမျှကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်သူသည်အခြားသူများကိုရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်တာ ၀ န်မပေးနိုင်ပါ။ သူ၏အမွေဥစ္စာကိုသူ့အစ်ကိုများပိုင်ရ၏။
ဘုရားသခင့်အစ်မသို့မဟုတ်ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး သည်ဖခင်ထံမှလက်ဆောင်ရရှိပြီးလက်ဆောင်ပေးသောအနေဖြင့်သူမနှစ်သက်ရာအတိုင်းစွန့်ပစ်နိုင်သည်ကိုအတိအလင်းဖော်ပြပြီးဖြစ်သောကြောင့်လက်ဆောင်ပေးသည်။ လွတ်လပ်စွာစွန့်ပစ်ခြင်း။ ဖခင်သေလျှင်သူမပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းကိုသူမလိုချင်သောသူတိုင်းကိုချန်ထားနိုင်သည်။ သူ့အစ်ကိုတွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။
180. ဖခင်တစ် ဦး သည်မိမိသမီးအားလက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မထပ်ရသေးသောပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသမီးအားဖဲဝေ။ သူမသေလျှင်၎င်းအနေဖြင့်သူမသည်ကလေးဘဝအနေဖြင့်အဖေ၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းကိုလက်ခံရရှိပြီး၊ ၎င်း၏ဘဝ၏ကြာချိန်။ သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်သူ၏ညီအစ်ကိုများဖြစ်သည်။
အဘသည်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌အိမ်သူအိမ်သားအိမ်သူအိမ်သားများ၊ အပျိုကညာဖြစ်သောဘုရားကိုသန့်ရှင်းစေ။ မုဆိုးမကိုမပေးလျှင်၎င်း၊ ဖခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားလျှင်ကလေး၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုအမွေဆက်ခံခြင်းခံရမည် အဖေဘက်ကအိမ်နှင့်သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံး usufruct ပျော်မွေ့။ သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်သူ၏ညီအစ်ကိုများဖြစ်သည်။
182. ဖခင်တစ် ဦး သည်မိမိ၏သမီး၊ ဗာဗုလုန်မာဒုတ်၏ဇနီးကိုသန့်ရှင်းစေပြီးလက်ဆောင်နှင့်ပေးကမ်းခြင်းမပြုပါက၊ အကယ်၍ ဖခင်သေဆုံးသွားပါကသူမအစ်ကိုများထံမှအဖေ၏အိမ်ကိုအမွေဆက်ခံခြင်းတွင်ကလေး၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုလက်ခံရရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်း Mardouk ၏ဇနီးသည်သူမပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုသူမဆန္ဒရှိသူတိုင်းထံထားနိုင်သည်။
၁၈၃။ အကယ်၍ ယောက်ျားသည်သူသည်မယားငယ်နှင့်ကရင့်ခင်ပွန်းတစ် ဦး နှင့်လက်ဆောင်ပါသောသခင့်သမီးကိုလက်ဆောင်ပေးလျှင်၊ ဖခင်ကွယ်လွန်လျှင်သူမအဖေ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမည်သည့်အရာမှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ယောက်ျားသည်သူသည်မယားငယ် ရှိ၍ ရသောခင်ပွန်းကိုမအပ်ရ။ အကယ်၍ ဖခင်ဖြစ်သူသေသွားလျှင်သူ့အစ်ကိုကသူ့အားဖခင်၏ကံကြမ္မာနှင့်လိုက်ဖက်သည့်ဖှဲ့ပေးရမည်။
၁၈၇။ နန်းတော် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောခုံရုံး၏သားသို့မဟုတ်ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး ၏သားကိုတောင်းဆိုခွင့်မရှိပါ။
အကယ်၍ လက်သမားသည်ကလေးတစ် ဦး ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်နှင့်သူ၏အနုပညာကိုသင်ကြားရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့လျှင်၎င်းကိုနောက်မှပြောဆိုခွင့်မပြုပါ။
190. အကယ်၍ ယောက်ျားသည်သားတစ်ယောက်အနေဖြင့်မွေးစားပြီးအခြားကလေးများနှင့်အတူကြီးပြင်းလာသည်ကိုကလေးအားမပံ့ပိုးပါကမွေးစားထားသောသားသည်ဖခင်အိမ်သို့ပြန်သွားနိုင်သည်။
၁၉၁၁။ သားယောက်ျားကိုမွေးစားပြီးကြီးပြင်းလာသူတစ် ဦး သည်အိမ် ထောင်၍ ကလေးမွေးဖွားပြီး၎င်းမွေးစားသောသားကိုငြင်းပယ်လိုသူသည်ထိုသားကိုမသွားသင့်ပါ။ မွေးစားဖခင်သည်ကလေး၏ဝေစု၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုပေးရမည်။ သူသည်လယ်၊ ဥယျာဉ်၊
ခုံရုံး၏သားသို့မဟုတ်ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး ၏သားကသူ၏မွေးစားဖခင်သို့မဟုတ်မိခင်အား“ သင်သည်ငါ့မိဘမဟုတ်၊ ငါ့အမိမဟုတ်” ဟုဆိုလျှင်သူတို့၏လျှာကိုပြတ်လိမ့်မည်။
ခုံရုံးသို့မဟုတ်ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး ၏သားသည်သူ့အဖေ၏အိမ်ကိုအလိုရှိပါကမွေးစားဖခင်နှင့်မွေးစားမိခင်ကိုအဖေဘက်မှအိမ်သို့ပြန်ပို့လိုလျှင်မျက်စိကွယ်သွားလိမ့်မည်။
အကယ်၍ လူတစ်ယောက်ကကလေးကိုသူနာပြုတစ် ဦး အားပေးပြီးကလေးကလက်ထဲမှာသေလျှင်၊ မိဘနှင့်မသိသောသူနာပြုကအခြားကလေးကိုကျွေးမွေးသည်ဆိုပါကသူမအားကျွေးမွေးမှုအတွက်အပြစ်ပေးမည် အမိနှင့်အမိကို၎င်း၊ ရင်သားကို၎င်းမသိသောအခြားတပါးသောသားသည်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်။
195 ။ တစ်သားသည်အဘဒဏ်ခတ်ခဲ့လျှင်, သူ့လက်ပုဆိန်တို့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခံရကြလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သူသည်လွတ်မြောက်ရေးသမား၏မျက်လုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်လျှင်သို့မဟုတ်လွတ်မြောက်သူတစ် ဦး ၏အရိုးကိုချိုးဖဲ့ခဲ့ပါကသူသည်သူ့ကိုတစ်ပေါင်ရွှေပေးလိမ့်မည်။
200 ။ တစ်ဦးသောသူသည်မိမိတန်းတူတဲ့သွားချိုးပါလျှင်, သူ့သွားလည်းကျိုးပျက်ရပါမည်။
201. အကယ်၍ သူသည်လွတ်မြောက်ရေးသမား၏သွားကိုချိုးပါကသူသည်ရွှေပေါင်၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုပေးလိမ့်မည်။
202 ။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်အဆင့်မြင့်သူတစ် ဦး အားထိမိပါကသူသည်လူအများရှေ့အာရုံခြောက်ပါးရိုက်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။
204 ။ တစ်ဦးလွတ်မြောက်လာသည်အခြားဖရီးမနျးတာမျိုးလိုလျှင်, တစ်ဆယ်ကျပ်များ၏ပေါင်းလဒ်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
လွတ်မြောက်သူတစ် ဦး ၏ကျွန်သည်လွတ်မြောက်သူကိုရိုက်လျှင်သူ၏နားသည်ပြတ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ စကားများရန်ဖြစ်သည့်အခါလူတစ် ဦး သည်အခြားသူတစ် ဦး ကိုထိုးနှက်။ ဒဏ်ရာရပါကသူက“ ငါသူ့ကိုတမင်မထိခိုက်ဘူး” ဟုကျိန်ဆိုရမည်။ သူသည်ဆရာဝန်ကိုပေးလိမ့်မည်။
ထိုသူသည်ဒဏ်ရာရရှိလျှင်သေသည်နှင့်အမျှကျိန်ဆိုရမည်။ ထိုသူသည်အခမဲ့မွေးဖွားလျှင်၊ ရွှေပေါင်ဝက်ကိုပေးရမည်။
ယောက်ျားသည်လွတ်လပ်စွာမွေးဖွားသောအမျိုးသမီးကိုထိ မိ၍ မမွေးသေးသောကလေးကိုဆုံးရှုံးလျှင်၊ သူသည်ငွေဆယ်ဆယ်ပိherာပေးရမည်။
210 ။ ထိုမိနျးမသေလျှင်, သူ့ကိုမှသူမ၏သမီးအသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အခမဲ့အတန်းအစားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလေဖြတ်ခြင်းကြောင့်မမွေးသေးသောကလေးကိုဆုံးရှုံးလျှင်သူသည်ငွေငါးပိfiveာပေးရမည်။
212 ။ သူမကွယ်လွန်ပါကတစ်နှစ်ခွဲပေါင်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
213. အကယ်၍ ယောက်ျားသည်မိန်းမငယ်ကိုရိုက်လျှင်၊ ထိုမိန်းမသည်သူငယ်ရှုံးလျှင်၊ ငွေပြားနှစ်ပြားကိုလျော်ရမည်။
214 ။ မိန်းကလေးကွယ်လွန်ပါကတတိယစာအုပ်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ဆရာဝန်က ဦး ရေပြားနှင့်အတူကြီးမားသောခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုပြုလုပ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်သူသည် ဦး ရေပြားဖြင့်ခေါင်းအုံးကိုဖွင့ ်၍ မျက်စိကိုကယ်တင်လျှင်ငွေအကျပ်ဆယ်ဆယ်ကိုရရမည်။
၂၁၇။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ကျွန်ဖြစ်လျှင်ပိုင်ရှင်သည်ဆရာဝန်အားငွေနှစ်ပိelsာပေးရမည်။
အကယ်၍ ဆရာ ၀ န်သည် ဦး ရေပြားနှင့်အတူကြီးမားသောခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ပြီးလူနာကိုသတ်လျှင်၊ သူသည် ဦး ရေပြားဖြင့်ခေါင်းအုံးကိုဖွင့ ်၍ မျက်စိပျက်လျှင်၊ သူ၏လက်များကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိမ့်မည်။
သူသည် ဦး ရေပြားနှင့်ခေါင်းအုံးတစ်လုံးဖွင့်ပြီးမျက်စိပျောက်လျှင်ကျွန်၏တန်ဖိုးထက်ဝက်ကိုပေးရမည်။
အကယ်၍ ဆရာဝန်ကအရိုးကျိုးနေသောလူ၏အရိုးသို့မဟုတ်အနာရောဂါစွဲနေသောလူတစ် ဦး ကိုစုစည်းပါကလူနာသည်ဆရာဝန်အားငွေငါးပိelsာစီပေးရမည်။
အကယ်၍ ကျွန်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ပိုင်ရှင်ကဆရာဝန်ကိုငွေအကျပ် ၂ ကျပ်ပေးရမည်။
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်တစ် ဦး သည်မြည်းတစ်ကောင်သို့မဟုတ်နွားကိုအကြီးစားခွဲစိတ်ကုသပြီး၎င်းကိုကုသပေးလျှင်ပိုင်ရှင်သည်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အားငွေတစ်ဆပ်၏ခြောက်ပုံတစ်ပုံကိုပေးရမည်။
225 ။ အကယ်၍ သူသည်ကြီးမားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမြည်းတစ်ကောင်သို့မဟုတ်နွားပေါ်တွင်သတ်ပြီးသတ်ပစ်လျှင်၎င်းသည်ပိုင်ရှင်အားသူ၏တန်ဖိုး၏လေးပုံတစ်ပုံကိုပေးရမည်။
၂၂၆။ သခင်အားမသိသောဆံပင်ညှပ်သူတစ် ဦး သည်ရောင်းရန်မဟုတ်သောကျွန်၏ထူးခြားသောလက္ခဏာကိုပြတ်တောက်သွားပါကဆံပင်ညှပ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။
အကြင်သူသည်ဆံပင်ကိုလှည့်ဖြား။ ကျွန်၏ထူးခြားသောလက္ခဏာနှင့်မရောင်းသောကျွန်ကိုတံဆိပ်ခတ်စေရန်သူသည်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရပြီးသူ၏အိမ်တွင်မြှုပ်နှံရမည်။ ဆံပင် "ငါကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအမှတ်အသားမပြုခဲ့" ကျိန်ဆိုရပါလိမ့်မယ်သူသည်အပြစ်မရှိပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကန်ထရိုက်တာတစ် ဦး ဦး သည်တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးပါကသူသည်စတုရန်းမီတာ ၄၀ လျှင် * ဖုံးနှစ်ခုအတွက်ရှယ်ကယ်လ်လစာပေးလိမ့်မည်။
* (တစ် sar = 376 40 # စတုရန်းပေစတုရန်းမီတာ)
229 အကယ်၍ ကန်ထရိုက်တာသည်တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အိမ်တစ်လုံးဆောက်သော်လည်းစနစ်မကျပါက၎င်းအိမ်သည်ပြိုကျပြီးပိုင်ရှင်ကိုသတ်လျှင်၎င်းသည်ကန်ထရိုက်တာသည်သေရမည်။
အကယ်၍ သူသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖျက်ဆီးပါကဖျက်ဆီးခံရသောအရာမှန်သမျှကိုသူလျော်ကြေးပေးရမည်။ သူတည်ဆောက်ခဲ့သောအိမ်ကိုစနစ်တကျမတည်ဆောက် ခဲ့၍ ပြိုလဲခြင်းကြောင့်သူသည်အကြွေးတင်နေသည်။ ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ။
အကယ်၍ ကန်ထရိုက်တာတစ် ဦး သည်သူမဆောက်လုပ်ရန်အတွက်တောင်မှတစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အိမ်တစ်လုံးဆောက်လျှင်၊ နောက်ပိုင်းတွင်နံရံများစောင်းနေပုံရသည်ဆိုပါကကန်ထရိုက်တာသည်သူ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်သူတို့ကိုစုစည်းရမည်။
အကယ်၍ လှေသမားတစ် ဦး သည်လူတစ် ဦး အတွက် ၁၈ ကုဗမီတာ * လှေတစ်စီးတည်ဆောက်ပါကသူသည်ငွေနှစ်ပိtwoာလစာပေးသင့်သည်။
* (တစ်ဦးဂုရ = 300 လီတာ; ဂုရ = 60 18.000 လီတာ)
အကယ်၍ လှေတည်ဆောက်သူသည်တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်လှေတစ်စင်းဆောက်သည်၊ သူသည်၎င်းကိုလုံလုံခြုံခြုံမပြုလုပ်ပါက၊ ထိုနှစ်တွင်ပင်ထိုလှေကိုအဝေးမှလွှတ်လိုက်ပြီးပျက်စီးမှုမှခံစားခဲ့ရလျှင်ဆောက်သူသည်ဤလှေကိုပြန်ယူရမည်။ နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်မှာရေစိုခံစေ။ ရေလုံသည့်ပိုင်ရှင်အားပြန်လည်ပေးအပ်မည်။
236 ။ လူသည်သင်္ဘောသားအားမိမိလှေကိုဆုတ်ကြောင့်လျစ်လျူရှုထားခြင်းဖြစ်သည်သင်္ဘောသားများနှင့်လှေပျက်စီးသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်, သင်္ဘောသားနစ်နာကြေးအဖြစ်လှေ၏ပိုင်ရှင်သည်အခြားလှေကိုပေးရမည်။
လူတစ် ဦး သည်သင်္ဘောသားတစ်စီးနှင့်သူ၏လှေကိုငှား။ စပါး၊ အဝတ်၊ ဆီနှင့်ရက်စွဲများနှင့်စသည်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးလျှင်ထိုသူအားလက်နက်ချရန်လိုအပ်ပါက - အကယ်၍ သင်္ဘောသားသည်သတိမရှိသောသူဖြစ်လျှင်၊ ပျောက်ဆုံးသွားသောအခါသင်္ဘောသည်သင်္ဘော၏တန်ဖိုးနှင့် ၄ င်း၏ပျက်စီးသွားသောအရာအားလုံးအတွက်ကုစားရမည်။
အကယ်၍ သင်္ဘောသားကတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့လှေကိုနစ်မြှုပ်လိုက်ရင်ပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့တစ်ဝက်ကိုပေးရမယ်။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်ကသင်္ဘောသားကိုငှားမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဂျုံလီတာ ၁၈၀၀ ပေးရမယ်။
240 ။ ကုန်သည်သင်္ဘောတစ်ဗန်းနဲ့စီးဆင်းမှုရင်ဆိုင်ခဲ့လျှင်, နစ်မြုပ်ခဲ့သည့်သင်္ဘော၏မာစတာဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တရားသဖြင့်စီရင်ရှာကြလိမ့်မည်; ကူးတို့နစ်မြုပ်သည့်ကုန်သည်သင်္ဘောရဲ့မာစတာသည်, ကူးတို့၏ပိုင်ရှင်မှပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာအားလုံးလျော်ကြေးပေးရမည်။
၂၄၂ အကြင်သူသည်တစ်နှစ်လျှင်နွားကိုငှားလျှင်၊ နွားထီးတကောင်စီကို ၁၂၀၀ လီတာ * ပေးရမည်။
သူသည်ကျွဲနွားနွားတစ်ကောင်၏ဝင်ငွေအနေဖြင့်ပိုင်ရှင်အားဂျင်လီတာ ၉၀၀ ပေးရမည်။
၂၄ အကြင်သူသည်နွားကို၎င်း၊ မြည်းကိုငှါး။ လယ်ပြင်၌ခြင်္သေ့သတ်လျှင်၊
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်နွားကိုငှား။ နှိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရိုက်နှက်ခြင်းဖြင့်သတ်ပစ်လျှင်ပိုင်ရှင်၊ နွားအတွက်နွားကိုလျော်ကြေးပေးရမည်။
246 ။ လူတစ်ယောက်သည်နွားတစ်ကောင်ငှားပြီးခြေလက်ချိုးလိုက်လျှင်လည်ပင်းကြိုးကိုဖြတ်လိုက်လျှင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့်အမဲသားအတွက်အမဲသားကိုလျော်ကြေးပေးရသည်။
အကြင်သူသည်နွားကိုငှား။ ကယ်တင်လျှင်၊ သူသည်အခကိုပေးရမည်။
နွားကိုငှား။ အခေါက်ကိုဖြတ်ခြင်း၊ အမြီးကိုဖြတ်ခြင်း၊ တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုခံသောသူသည်ဥစ္စာရှင်၏လေးပုံတပုံကိုလျော်ရမည်။
၂၄249. နွားကိုချီးမြှောက်သောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသေစေခြင်းငှာဒဏ်ခတ်တော်မူလျှင်၊ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသောသူသည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။
အကယ်၍ နွားသည်လမ်းပေါ်သို့ဆင်းသွားသည်နှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်က၎င်းကိုတွန်း။ သတ်ပစ်လျှင်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်တရားစွဲဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ နွားသည်ဒဏ်ရာရသော်၎င်း၊ ၎င်းသည်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်ကိုသိသော်၎င်း၊ သူ၏ ဦး ချိုသည်မဖြတ်သော်လည်း၎င်းနွားကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိလျှင်၎င်းနွားသည်လွတ်လပ်စွာမွေးဖွားသောလူကိုသွေးဆောင်။ သတ်ပစ်လျှင်၎င်း၊ ပိုင်ရှင်သည်ရွှေပေါင်ဝက်၏ပမာဏကိုပေးရမည်။
၂၅၂ လူသတ်သည်ကျွန်ဖြစ်လျှင်၊ ထိုသခင်သည်ဥစ္စာအလျှင်းမရှိလျှင်၊
၂၅၃။ လယ်ကွင်းကိုဂရုစိုက်ရန်၊ မျိုးစေ့ကြဲရန်၊ နွားထီးတစုကိုထားရန်၊ ထိုလယ်ကိုစိုက်ပျိုးရန်သဘောတူသူသည်ကောက်ပဲသီးနှံသို့မဟုတ်အခြားအပင်များကိုခိုးယူ။ မိမိအတွက်သိမ်းဆည်းထားမည်ဆိုလျှင်။ ငါတို့လက်ကိုပုဆိန်နှင့်ခုတ်နိုင်သည်။
သူသည်နွားအသင်းကိုအငှားချခြင်း၊ မျိုးစေ့ခိုးခြင်း၊ လယ်၌စိုက်။ စိုက်ခြင်းမရှိလျှင်သူသည်တရားစီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။
* (တစ်ဧက = 100 gans; တစ် # လေးဆယ်m² GAN)
256 ။ ရပ်ရွာကမဆပ်နိုင်လျှင်, ဒါဟာမွေးမြူရေးနှင့်အတူ (အလုပ်ရက်) ဒီလယ်ပြင်၌ထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကလယ်သမားတစ် ဦး ကိုငှားလျှင်တစ်နှစ်လျှင် (၂,၄၀၀) လီတာ * ပေးရမည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်နွားမွေးသူတစ် ဦး ကိုငှားလျှင်တစ်နှစ်လျှင်ဂျုံလီတာ ၁၈၀၀ * ပေးရမည်။
၂၅။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်လယ်တစ်ခုတွင်လှော်ဖြင့်ဘီးကိုခိုးယူလျှင်ပိုင်ရှင်သည်ငွေငါးပိ*ာ * ပေးရမည်။
* (ငွေတစ်ပေါင် = ၆၀ ကျပ်၊ ငွေကျပ်တစ်ချောင်းဖြင့်သားရေဖိနပ် ၁၂ လုံးဝယ်နိုင်သည်)
(ရွှေအခွက်တဆယ် = ငွေအကျပ်တဆယ်၊ ငွေအကျပ်တုံး = ကြေးဝါအကျပ် ၆၀၊ သားရေဖိနပ်တစ်လုံးသည်ကြေးငွေ ၅ ကျပ်ဖြစ်သည်။ )
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် shaduf သို့မဟုတ်ထယ်ကိုခိုးယူလျှင်ငွေသုံးပိpayာပေးရမည်။
မည်သူမဆိုနွားသို့မဟုတ်သိုးအတွက်သိုးထိန်းတစ် ဦး ကိုငှားလျှင်တစ်နှစ်လျှင်ဂျုံလီတာ ၂,၄၀၀ ပေးရမည်။
မည်သူမဆို၊ နွားသို့မဟုတ်သိုးဖြစ်ပါက […]
၂၆၃။ သူပေးသောနွားသို့မဟုတ်သိုးကိုသတ်လျှင်ပိုင်ရှင်သည်အမဲသားအတွက်အမဲသား၊ အသားကျသောသိုးအတွက်ပြန်လည်ပေးရမည်။
264 ။ စောင့်ရှောက်ဖို့နှားသို့မဟုတ်သိုးအပ်နှင်းနှင့်အပေါ်သို့သဘောတူညီခဲ့အဖြစ်သူ၏လုပ်ခလစာကိုလက်ခံရရှိနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုသည်တိရစ္ဆာန်အရေအတွက်သို့မဟုတ်သိုးလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ကလေးမွေးဖွား၏နံပါတ် minimize လုပ်သူတစ်ဦးသည်သိုးထိန်း, အကယ်. သူသည်ထုတ်ကုန်ပြန်လာရမည် စာချုပ်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်တွင်အမြတ်အစွန်း။
265 ။ နှားသို့မဟုတ်သိုးအပ်နှင်းခဲ့သည်သူတစ်ဦးသည်သိုးထိန်းသည်, နွား၏သဘာဝတိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်အမှားထိုက်သော, ဒါမှမဟုတ်ရောင်းချပါကတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆယျကွိမျဆုံးရှုံးမှုပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
၂၆၇။ သိုးထိန်းသည်တစ်စုံတစ်ခုကိုလျစ်လျူရှုပြီးမြင်းတစ်ကောင်တွင်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပါကသိုးထိန်းသည်သူသည်မြင်းမြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမတော်တဆမှုကြောင့်အမှားမှားမိပြီးပိုင်ရှင်ကိုလျော်ကြေးပေးရမည်။ နွားသို့မဟုတ်သိုး။
268 ။ မည်သူမဆိုကောက်နယ်တဘို့နွားငှားရမ်းနေလျှင်, ငှားရမ်းငွေပမာဏကိုစပါးနှစ်ဆယ်လီတာ * ဖြစ်ပါသည်။
269 ။ သူကကောက်နယ်တဘို့မြည်းငှားရမ်းနေလျှင်, ငှားရမ်းငွေပမာဏကိုစပါးနှစ်ဆယ်လီတာ * ဖြစ်ပါသည်။
270 ။ သူကကောက်နယ်တဘို့အသက်ပျိုသောတိရိစ္ဆာန်ငှားရမ်းနေလျှင်, ငှားရမ်းငွေပမာဏကိုစပါးကိုဆယ်လီတာ * ဖြစ်ပါသည်။
271 ။ မည်သူမဆိုနွားငှားရမ်းနေခဲ့လျှင်, လှည်းများနှင့်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူသူသည်တစ်နေ့လျှင်စပါး * တရာရှစ်ဆယ်လီတာကိုလျော်ရမည်။ * (180 QA)
272 ။ မည်သူမဆိုသာလှည်းငှားရမ်းလိုလျှင်, တစ်နေ့လျှင်စပါး * လေးဆယ်လီတာကိုလျော်ရမည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး သည်စိုက်ပျိုးရေးနေ့လုပ်သားတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းပါကသူသည်နှစ်သစ်မှငါးကြိမ်မြောက် (Augustပြီမှသြဂုတ်လ) အထိတစ်ရက်လျှင်ငွေ ၆ ဂရမ် * ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခြောက်လမှနှစ်ကုန်အထိ (စက်တင်ဘာလမှမတ်လအထိ) တစ်ရက်လျှင်ဂရမ် ၅ လုံးပေးရမည်။
* (အဖြေ = ဂေ 1 / 20 ကျပ်)
အကြင်သူသည်လိမ္မာသောလက်သမားတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းလျှင်သူသည်ဂရ ၅ ခု၊ အိုးထိန်းသမားတစ် ဦး ၏လုပ်အားခ (၅) ဂီရာ၊ အမြတ် ၅ ဂီဂါ၊ တစ်နေ့လျှင်တစ်ရက် Meyer … gerah ၏။
အကယ်၍ သူသည်ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီးငှားရမ်းပါကသူသည်တစ်ရက်လျှင်ဂရစ်ဂါလံ ၂ ခုခွဲပေးရမည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ၁၈ ကုဗမီတာရှိသောလှေတစ်စီးကိုငှားလျှင်ငှားရမ်းခတစ်နေ့လျှင်ငွေတစ်ပိsheာခြောက်ပုံတစ်ပုံကိုပေးရမည်။
အကြင်မိန်းမသည်ကျွန်ယောက်ျားမိန်းမကိုဝယ်။ တစ်လမကုန်မှီဖျားနာခြင်းဖြစ်လျှင်၊ ကျွန်သည်ရောင်းသူထံ ပြန်၍ ငွေပြန်အမ်းခံရလိမ့်မည်။
တစ်စုံတစ် ဦး သည်ကျွန်ယောက်ျားမိန်းမကို ၀ ယ်ပြီးတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဝယ်သူဖြစ်ပါကရောင်းချသူသည်ပြောဆိုချက်ကိုဖြေကြားရမည်။
နိုင်ငံခြားတွင်နေစဉ်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး သည်မိမိ၏နိုင်ငံမှအခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏ကျွန်ဖြစ်သောကျွန်ယောက်ျားမိန်းမကိုဝယ်လျှင်၊ ကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမကိုပိုင်လျှင်၊ ကျွန်မိန်းမသည်ကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမတို့ကိုခေါ်။ ၊ ကျွန်မူကား၊ အခွန်မခံဘဲပြန်လာရမည်။
281. အကယ်၍ သူတို့ကအခြားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှဖြစ်လျှင်ကုန်သည်သည်ထိုကုန်သည်အားပေးရမည့်ငွေပမာဏကိုကြေငြာရမည်။
၂၈၂ အကယ်၍ ဤကျွန်က“ သင်သည်ငါ့သခင်မဟုတ်” ဟုသူ့သခင်အားပြောဆိုပါကသူတို့ကသူ့ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလျှင်သခင်သည်သူ၏နားကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိမ့်မည်။
ဟာမူရာဘီကျမ်းနှင့်သမ္မာကျမ်းစာပါပညတ်တော်ဆယ်ခုအကြားတူညီမှုများကဤဗာဗုလုန်ကုဒ်တွင်ဤပညတ် ၁၀ ချက်သည်သူတို့၏ဇာစ်မြစ်ကိုဆွဲတင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စေသည်။
Hammurabi ၏ဗာဗုလုန် Code ကို
€2ကနေ 8,10 အသစ်
1 21,00 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 17,29 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 31, 2021 4:54 pm တွင် updated
ဘဝ၏မူလအစ - Hubert Reeves (ဗီဒီယို)
ကင်ဆာနှင့် AIDS ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကုသမှုအဖြစ်ပျားအဆိပ်၏